isazi Islamic uthi Bitcoin kuthobelana ngaphansi komthetho Sharia - Blockchain Izindaba
isazi Islamic uthi Bitcoin kuthobelana ngaphansi komthetho Sharia
Isimemezelo wakamuva i isazi Islamic ukuthi Bitcoin ithobelana ne Sharia nomthetho kungaba imbangela ngemuva lanamuhla $1000 intengo yokwanda, ukuvula emakethe ukuba abatshalizimali abangamaSulumane ubukade ungaqiniseki uma cryptocurrency wafaneleka njengommemezeli imali ngaphansi komthetho Sharia.
Bitcoin uwela ngaphansi izincazelo ezithile imali Sharia nomthetho - yini kuba kwamukelwa kabanzi njengohlobo lwemali ngumphakathi noma uhulumeni igunya.
Mufti Muhammad Abu Bakar, a Sharia umeluleki nokulandela isikhulu e Blossom Ezezimali e Jakarta, eshicilelwe isinqumo iphepha ukuthi ezimweni ezithile, Bitcoin Ngempela Halal (kuvunyelwe).
"EJalimane, Bitcoin yaziwa njengenye lwemali zomthetho ngakhoke efanelekela imali Islamic eJalimane. Emazweni afana no-US, Bitcoin sintula isimo esemthethweni ngokomthetho yemali kodwa okuvunyelwe inkokhelo ezihlukahlukene abathengisi, ngakhoke efanelekela Islamic imali wesiko. "
Ngaphezu kwalokho, Bitcoin nobuchwepheshe blockchain qondanisa kahle Sharia amafilosofi. Fractional reserve banking lapho ubunikazi imali abathintekayo kuwumphumela i “loan abangenasimilo” (inzalo) asivunyelwe. Ngenxa blockchain kwesithathu kufakazela ubunikazi, empeleni zomkhalazi ngaphezulu nge Sharia kuka yasebhange, futhi lokhu bonke kufakwe iphepha enyatheliswa Mufti Muhammad Abu Bakar.
Blockchain Izindaba 23 Januwari 2018
Owabe UBS amabhange la ...
Circle oluqalisa cryptocurrency ukuhweba lokusebenza
izinkokhelo Digital com ...
Mexico siqhamuka nezindlela ukubhida blockchain based
Previous Post:Baidu oluqalisa blockchain-based platform isitokwe isithombe
Next Post:Indian mfihlo exchange Coinsecure zangena kuma